ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်အမှတ် N.M.Device/kit-83/2013 ရရှိပြီး ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးသောကြောင့် လက်ရှိမြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများသာမက သွေးချိုဝေဒနာရှင်များ စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။မည်သည့်ခလုတ်မှ နှိပ်စရာမလို(၄)စက္ကန့်ဖြင့် မှန်ကန်သောအဖြေထွက်ခြင်း၊အပိုပစ္စည်းများကို မြန်မာပြည်အနှံ့ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ခြင်း၊အာမခံ(၃)နှစ်ပါရှိခြင်းနှင့်(၃)နှစ်ကျော်သွားလျှင် သုံးစွဲသူဆန္ဒရှိပါကအဟောင်းပေးအသစ်ပြန်လဲပေးခြင်း စသည်တို့ကိုစိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ဝယ်ယူအားပေးလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Nyi Nyi Shin Thant Co.,Ltd တွင် ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
MDF Desk Mercury Sphygmomanometer
First grade quality - virgin material used.Purity of mercury 99.99% due to assured triple distillation process.0 to 300 mm of Hg scale with elegant finish, fine numbering and durable background contrast paint for clear visibility.Fused type, permanent graduation marking on the glass tube.Special control valve for perfect pressure drop.Best quality cuff for getting excellent grip.Proven rubber material like Bag and Bulb to give more durability.Surface plating adapted to all exposed metal parts to prevent corrosion.Classic Hi-stove painting to the body of the instrument to withstand in any climate.Optimum damping effect provided for easy and fast measurement. ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် သင့်ဘဝရဲ့အဖော်မွန်အဖြစ် ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပြီး ကျန်းမာသောဘဝများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Digital Automatic Blood Pressure Monitor (Arm Type)
-comfort Inflation Technology. -Irrgular Heartbeat (IHB) Detection. -Voice Guidance (optional). -Blood Pressure Monitor . -Sensor switch. -Quick &amp; Accurate measurement tech. -With 90 groups memory function. -Time display. -Low-Noise design. ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် သင့်ဘဝရဲ့အဖော်မွန်အဖြစ် ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Digital Automatic Blood Pressure Monitors များအား ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပြီး ကျန်းမာသောဘဝများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Display -	Color LCD Jumbo Display (LCD Color မျက်နှာပြင် အလွန်ကြီးမားခြင်း) -	Colored Back Light System (အခြားစက်များနှင့် မတူပဲ မျက်စိကို အေးမြစေပါသည်။) -	Liquid Crystal Display ဖြင့် ပြသသောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ မြင်ရပါသည်။ Battery -	Battery (or) AC/DC Adapter ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ -	Low Battery Indication ပြခြင်း -	Power Saving ပါခြင်း -	လက်ဆောင်အဖြစ် 7000 ကျပ်တန် AC/DC Adapter ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားပါသည်။ Function -	စားပွဲတင်နာရီအဖြစ် Alarm4Nos အထိသုံးနိုင်ခြင်း -	အခန်းတွင်းအပူချိန်ကိုလည်း ပြသနိုင်ခြင်း -	Date &amp; Time ပါခြင်း -	Multi-User x2(50 Memories for Each) -	Blood Pressure &amp; Pulse shown at the same time (သွေးပေါင်အတက်အကျ နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်းကို တပြိုင်တည်း ပြသခြင်း) -	W.H.O Indication (အနီ / အ၀ါ / အစိမ်း) ပြသခြင်း -	Color Bar Indication (အရောင်ဖြင့် ပြသသောကြောင့် အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်ခြင်း) -	Irregular plus detection (တိုင်းတာနေစဉ် အနေအထား မှန်/မမှန် ပြသခြင်း) -	Auto Power Off ပါသောကြောင့် Power Saving ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ အတွက် Asia Face Trading ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိသော Alkaline Energy Kloder System ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော ရေသန့် စက် များကို ရောင်းချ တပ်ဆင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော ဓာတုပစ္စည်းများ ၊ ဓာတ်သတ္တုများ နှင့် ရောဂါပိုးမွှားများကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ ၏ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွာစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါ သည်။မသန့် ရှင်းသော ရေကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာရောဂါနှင့် အခြားရောဂါပေါင်း များစွာဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ မိသားစု ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရ သောရေသန့် ကို သာ ရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ Alkaline ရေသန့်စနစ်သည် ကျန်း မာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီး စိတ်အချရဆုံးနှင့် အတွင်ကျယ်ဆုံးသော ရေသန့် ထုတ်လုပ်သည့် နည်းဖြစ်ပါသည်။ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့( WHO ) ၏ ထောက်ခံချက်ရရှိထားသည့် တစ်ခု တည်းသော နည်းစနစ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်Alkaline နည်းစနစ်ဖြင့်ထုတလုပ်ထားည့်အတွက် အာမခံပါသည်။
လျှပ်စစ် မီးမလို သောက်ရေသန့် စက် ( Energy Water System )
Asia Face Trading ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်မီး မလို သော သောက်ရေသန့် စက် တစ်မျိုးဖြစ်သည့် Energy Water System ရေသန့် စက်ကို လူကြီးမင်း တို့ အတွက် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချပေး လျက်ရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်မီး မလိုသော သောက်ရေသန့် စက် တစ် မျိုးဖြစ်သည့် Energy Water System သည်ရေသန့် စင်ရန်အတွက် အဆင့် ၆ ဆင့် ပါဝင်သောရေ သန့် စက် တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ( Ceramic Filter ) 0.3 micron Filter ရေတွင်ပါဝင်သည့် 0.3 mincron အထက်ရှိ အမှိုက်များ ၊ အနည်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ( Granular Activated Carbon Filter ) ကလိုရင်း အနံ့၊ ရွှံ့ စေးစသော အနံ့ ဆိုး များ နှင့် အရောင်များကို ဖယ်ရှားပေး သည်။ ( Resin Filter ) ကလိုရင်း အနံ့၊ ရွှံ့ စေးစသော အနံဆိုးများနှင့် ထုံးဓါတ်များကို ဖယ်ရှားပေး ပါသည်။ ( Block Activated Carbon Filter ) ကလိုရင်း အနံ့၊ ရွှံ့ စေးစသော အနံ့ ဆိုးများ နှင့် အရောင်များကို ထပ်မံဖယ်ရှား သန့် စင်ပေးသည်။ ( Bio Ceramic ) Filter သည် အသုံးပြုပြီး သော စွန့် ပစ်ရေများကို သောက်သုံး နိုင်သည့် ရေသန့် ဖြစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသော နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း၏ စွမ်းဆောင်မှု့ ဓါတ်သတ္တု ပစ္စည်းများ ၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ၊ ဗိုက်ရပ်စ်ပိုးမွှားများကို ဖယ် ရှား သန့် စင်ပေးနိုင်သဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ရေသန့် စင် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ( Post Inline Carbon Filter ) ရေတွင် ပါဝင်သော အောက်ဆီဂျင် နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းရေ၏ အနံ့ နှင့် အရသာကို ပို၍ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပေးပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Energy Water System ရေသန့် စက်ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြု လိုပါက Asia Face Trading ကုမ္ပဏီကို တိုက် ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
LEA Face disposable paper occluder printed on sturdy card stock.
For preferential looking test situations with infants or children and adults with disabilities. Grating levels printed on each handle are: 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 and 8.0 cpcm (cycles/cm of surface). Includes instructions and storage case.4paddles, 20 cm in diameter
Schirmer Tear Flow Strips 300/box Item Number:101658 Sterile Strips, 300/box Strips withaprinted mm scale for easy test interpretation. These strips have smooth rounded tips, lint-free. The strips are individually packaged in an easy-to-open &#039;band-aid&#039; wrapper. Schirmer Tear Flow Test Strips are specially manufactured for Eye Care and Cure and havealong expiration date.